कोरोना संक्रमित हाइप्रोफाइल निको - Radio Bhairavi 88 MHz
विदुर– कोभिड–१९ को संक्रमण भएका नुवाकोटका हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु निको भएका छन् । कोभिड–१९ अर्थात् नोबेल कोरोना भइरसबाट संक्रमित भई आफ्नो पहिचान खुलाएका नुवाकोटका सबै व्यक्तिहरु संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
आफुलाई कोरोना संक्रमण भएको सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएका जनप्रतिनिधि तथ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरु कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन् । बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख राधिका तामाङ र उनका नौं वर्षिया छोरा, नेकपा किस्पाङका अध्यक्ष तथा सहकारी अभियन्ता वीरबल तामाङ, दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष किशोर आचार्य कोरोना मुक्त भएका हुन् ।
कोरोना संक्रमण भएको १४ दिनपछि बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख राधिका तामाङ र उनको नौं वर्षिया छोरा एकसाथ पूर्ण रुपमा निको भएका हुन् । नुवाकोट घर भएकी तामाङ गत भदौ १ गतेदेखि उनीहरु मकवानपुरको हेटौडास्थित उपसभामुख निवासको ‘होम आइसोलेसन’मा बसिरहेका थिए । उनले कोरोनाको दोश्रो स्वाव परिक्षण गर्दा कोभिड–१९ को नतिजा ‘नगेटिभ’ आएसंगै दैनिक कामकाज अन्य व्यक्तिहरुसंगको सम्पर्कमा रहेर गर्ने कामहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
कोरोना संक्रमित हुनु अघिदेखि अहिलेसम्म उनमा र उनको छोरामा कोरोनाको कुनै लक्षण र स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थिएन । निको भएपनि उनले स्वास्थ्य सजकता अपनाइरहेकी छन् ।
यता, नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका नेकपा अध्यक्ष बिरबल तामाङ पनि कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा बसोवास गरिरहेको बेलामा तीन साता अगाडि उनी कोरोना संक्रमित भएका थिए ।
त्यसपछि ‘होम आइसोलेसन’मा बसेका तामाङ १७ औं दिनका कोरोना मुक्त भएका हुन् । यस्तै, दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष किशोर आचार्य पनि कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् ।
तादी गापास्थित खरानीटार अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेर उपचार गरेका आचार्यको तेश्रो पटकको पिसिआर परिक्षणमा कोरोना मुक्त भएको हो । कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका उनको दोहो¥याएर पिसिआर परिक्षण गर्दा पनि संक्रमण देखिएको थियो ।
तेश्रो पटकको परिक्षणमा उनी कोरोना मुक्त भएपछि घर गएका हुन् । उनले आफु घरमा पुगेरपनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको जानकारी गराएका छन् ।
नुवाकोटमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भएका हाइप्रोफाइलका जनप्रतिनिधि तथा राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ता संक्रमणमुक्त भएका हुन् । केहि समय अगाडि कोरोना संक्रमित भएको बिषय बाहिर जानकारी गराएका उनिहरु कोरोनामुक्त भएका हुन् ।
तीन साता अगाडि देखि कोरोना संक्रमित भइ आइसोलेसन बस्दै आएका उनिहरु कोरोनामुक्त भएर घर फर्किएका हुन् । तीन साता अगाडी कोरोना संक्रमित भएका उपसभामुख तामाङ र उनका छोराको दोश्रो पिसिआर रिर्पाेट नेगेटिभ आएको उनको संचिवालयले जनाएको छ ।
कोरोना नेगेटिभ देखिए पछि फर्किएका उनिहरुले अबको दिनमा नियमित कार्यालय र काम सम्हाल्ने बताएका छन् । प्रदेश सभाकी उपसभामुख राधिका तामाङको घर नुवाकोटको शिवपुरी गाउंपालिका हो भने उनले गत २०७४ साल मंसिर १० गते भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नुवाकोट १ को (१) वाट वागमति प्रदेश सभाका नेकपाको तर्फवाट विजयी भएकी हुन् ।
रसुवागढीका कामदारमा कोरोना संक्रमण
नेपाल–चीन प्रवेशका लागि छोटो दुरीको रसुवागढी नाकामा कार्यरत एक कामदारलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । सामान लोड अनलोड गर्ने एक जना कामदारलाई कोरोना पुष्टि भएको हो ।
रसुवागढी नाका काठमाडौदेखि एकसय ५२ किलामिटर दुरी उत्तर भाटेकोशी नदीको पुर्वी किनारामा रहेको छ । त्यहाँ काम गर्ने मध्ये २६ वर्षीय एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।
उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । योसँगै रसुवामा हालसम्म १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमितमध्ये १४ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा ९, उत्तरगयामा ६, गोसाइँकुण्डमा १ र कालिकामा १ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको कार्यालय प्रमुख किरण श्रेष्ठको भनाई छ ।
विदेशबाट आएका १६, एक जना स्थानीय कामदार, एक जना स्वास्थ्यकर्मी र एक जना कर्मचारीमा हालसम्म कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । पांच गाउंपालिका रहेको रसुवा हिमाली जिल्ला हो ।
रसुवा अस्पताल धुन्चेका अनुसार अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका ५० वर्षका एक जना पुरुषको दोस्रो पटक गरिएको आरपिसिआरको रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात कोरोना नभएको आएको छ । रसुवामा ३५ शैयाको आइसोलेसन र ३ सय २ शैयाको क्वारेन्टाइन रहेको छ ।